Gịnị ga-esi Tunisia?
Tunisia bụ obere ala ala nke dị n'ụsọ Oké Osimiri Mediterenian. Akwa Azure, ihu igwe dị jụụ, ụlọ oriri ndị dị n'oge a, na-eri mmiri na akwụkwọ nri na-emetụta ọtụtụ puku ndị nlegharị anya kwa afọ. Njem ntụrụndụ na-akpali akpali, nri dị mma na ịma mma gbara ya gburugburu na-enye ọtụtụ obi ụtọ ịnọ ebe a. Oge dị otú ahụ ga-achọ ka ejide gị ruo ogologo oge na ọ dị oke mkpa iji ihe ncheta mee ihe. Kedu ihe ncheta ị ga-esi na Tunisia mee onwe gị na ndị ị hụrụ n'anya?
Na Tunisia, a na-akpọ ahịa omenala afụ. Ntughari nke ndi ahia, na esi esi ísì uto di elu, ihe di iche - igwe nke mara nke Arab. N'ebe a, ị nwere ike ịzụta, ọ dị ka ihe niile, na-amalite site na ngwaahịa nkịtị na-ejedebe na akwa carpets.
Akpa si Tunisia
Ebube si Tunisia dị elu ma mara na ọwụwa anyanwụ. Obodo Tunisia nke a ma ama na-eme ka ndị na-emepụta efep bụ Kairouan. Ihe ndị a dị iche iche dị iche iche na ọnụọgụgụ ọnụọgụ abụọ kwa mita. Ọ bụ njirimara a na ókè nke kapeeti - ihe bụ isi na-achọpụta uru ọ bara. Ọnụahịa ahụ nwere ike ịnweta site na ọtụtụ narị na ọtụtụ puku dollar. Ihe dị otú ahụ mara mma, nke a na-eji aka eme, ga-ejere gị na ụmụ ụmụ gị ozi, na-echetara gị njem a dị ebube. Otú ọ dị, chọpụta mgbe niile ịdị adị nke njirimara nke eziokwu na àgwà, nke na-agbakwunye na akụkụ na-ezighi ezi.
Ihe ncheta si Tunisia
Mbido na egwu. Banyere obere akpa akwa, nke sitere na Tunisia, ezigbo onyinye ga-abụ nnukwu ihe na ogwe aka ndị nwere ọnụ ụzọ. Ọnụ ụzọ bụ akara ngosi nke Tunisia, n'ihi na n'oge gara aga, a kwenyere na onye nwe ya nwekwuo ọgaranya, ebe ọ bụ na ọ dị mma ma sie ike n'èzí ya, ya mere ha ghọrọ ihe na-egosi ọdịmma mmadụ.
Eguzo na efere na iko mosa. Ihe ndị a dị nnọọ iche ma mara mma.
Ncheta, na-echeta ihe dị iche iche akụkọ ihe mere eme na-emenụ n'ala a, ndị dike, na ndị isi.
Aka Fatima. Onye na-ewu ewu na Tunisia si anya ọjọọ na spoilage. A na ere ha n'ụdị ọ bụla - ọla, ịcha akwa, eserese, wdg.
Rose nke desert. Ihe a na-adịghị ahụkebe, na-echeta ihe atụ nke ihe ncheta nke ihe ncheta nke nnu na ájá.
Ngwaahịa si olive. Ihe ike ha na ike ha na-eme.
Ngwurugwu na ihe mmiri maka osimiri . Ọrụ akwụkwọ nke ndị omenkà Tunisia ga-adọta uche ụmụ nwanyị.
A ga-enwe mmasị na ndị na-ere ihe na-eme ka a na-emepụta ihe dị iche iche dị iche iche na-edozi ihe dị iche iche. A na-atụ aro ịzụta ụtaba na ebe ahụ.
Mmanụ na-esi ísì ụtọ. Kpoo zuru oke, akwa mma na ọnụ ala. $ 3 maka 250 grams - naanị nrọ, na ị ga-agbakwunye naanị abụọ tụlee ịsa ahụ, ị ​​ga-anụkwa ụtọ.
Gịnịkwa ka a ga-esi na Tunisia nweta?
Anyị na-akwado ka ị ṅaa ntị na ọkwa pụrụ iche nke ụbọchị ndị obodo a na-ebupụ. Ụdị ha ruru mkpịsị aka aka, ha nwere mmerụ na-acha ọbara ọbara na-acha uhie uhie. Ị nwere ike ịhụ ọkpụkpụ.
Iju gị na mkpụrụ osisi cacti, na-atọ ụtọ nduku dị ụtọ.
Mint tii. Tee na-atọ ụtọ na akpa, nke anyị anaghị ezute.
Oliv mmanụ, nke dị mfe ịhọrọ . Tunisia dị ọkwa nke anọ na ụwa n'ichepụta ngwaahịa a. Ihe kachasị mma bụ mmanụ na-enweghị atụ.
Ụbọchị mmanya "Tibarin", ezigbo ụtọ, ihe ọṅụṅụ siri ike.
Fatty vodka. Vodka siri ike ma dị mma, mgbe nke a gasịrị, enwere obi ụtọ mgbe a gbasasịrị.
Na nke a niile, ego ole ka ị ga-aga Tunisia? A machibidoro mbupụ na mbubata nkeji ego nke mba na Tunisia. Nhọrọ kachasị mma ga-abụ dollar na euro, nke a pụrụ ịgbanwe n'ụzọ dị mfe dinars, ebe ị nwere ike ịkwụ ụgwọ maka ọrụ na ịzụta naanị ego ego. Ọzọkwa na ọtụtụ ụlọ ahịa na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ị nwere ike ịkwụ ụgwọ site na kaadị akwụmụgwọ. Ma, ọ bara uru na-echeta na ị nwere ike mbupụ site na mba ahụ karịa $ 800, yabụ mgbe ị na-ebubata nnukwu ego, ọ ka mma ịkwusa ya.
Ụlọ na chimeras na Kiev
Mmiri na-agba mmiri na slide
Kedu ka m ga-esi na-ebufe tiketi ụgbọ oloko?
Osimiri nke Tenerife
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Rom
Ebe nkiri na Bulgaria
Ụtụ isi na Italy
Ememe ezumike na February
Nri na njem
Anya na St. Petersburg na oyi
Debe otu picnic na akpa akwa
Ụlọ ntụrụndụ ski na Romania
Igbe maka ihu oval - nhọrọ kacha mma maka ntutu isi zuru okè
Beyonce na Jay z zụtara ụlọ nke e rere maka afọ asatọ
Nental Nerve Removal
Acha acha ọcha na ono
Mmepụta si na loops nke nkịta
Kedu esi esi nri okooko osisi n'ime oyi?
Mmiri na-abaghị uru n'oge ime
Ugboro ala na-ekwu maka kaadị ịhụnanya
Imecha ihu na ụlọ - Ezi ntụziaka
Nkasi obi na-enye obi ụtọ kwa ụbọchị
Ebe nchekwa siri ike Pochitel
Etucha maka redheads
Nnu ntanetị - nkata
Kedu otu ị ga-esi na-akpa àgwà na onye hụrụ gị n'anya?
Sharp Adjika site na tomato maka oyi
Chọọchị San Lorenzo
Etu esi eji akwa akwa?
Nanny-nwoke - ohuru anya
Egwuregwu Jeans 2013
Kniffonia - kụrụ ma lekọta
Ogwe igwe ịnyịnya ígwè
Shulyum si mutton